Ntọala Akwụkwọ Nsọ - IntegritySyndicate.com
Mbido Ntọala Akwụkwọ Nsọ
Nkwenye nke Matiu Nkebi 1, Okwu Mmalite & Echiche Farrer
Nkwenye nke Matiu Nkebi nke 2: Mmegide nke Matiu
Nkwenye nke Matiu Nkebi 3: Matiu 28:19
Edemede ndị na -esote na -akọwa ntụgharị Bible ndị masịrị, akụrụngwa ọmụmụ Bible, ihe anyị na -ekwu maka ihe odide ndị ozi kacha nwee ikike, yana akwụkwọ nsọ a na -emezigharị nke nwere ezi uche.
Na -ekpughe nsụgharị King James nke Bible
Ịmata nsụgharị Bekee kacha mma nke Akwụkwọ Nsọ
Okwu ikpe maka ijide Luk-Ọrụ dị ka onye akaebe mbụ nke Iso Ụzọ Kraịst
Matthew nwere ọtụtụ okwu na -etinye ntụkwasị obi ya n'ime ajụjụ.
A na -enye ihe atụ nke mmegide nke Matiu megide akụkọ ozioma ndị ọzọ. A na -achịkọtakwa amaokwu ndị ọzọ nwere nsogbu mgbe esemokwu.
Usoro baptizim nke atọ n'ime otu nke ngwụcha Matiu abụghị ihe mbụ sitere na Matiu. Ihe akaebe gụnyere amaokwu Eusebius na ọtụtụ ntụaka
Na -agbagha echiche na -ezighi ezi na edere Agba Ọhụrụ n'asụsụ Hibru
Nrụrụ aka nke Ọtọdọks nke ihe odide Agba Ọhụrụ
Ịghọta na ịmata ọdịiche dị n'etiti ihe odide Agba Ọhụrụ